Lix waxyaabood oo laga bartay guushii ay kooxda Man City ka gaartay Sunderland ee Premier League – Gool FM
Lix waxyaabood oo laga bartay guushii ay kooxda Man City ka gaartay Sunderland ee Premier League
(Sunderland) 14 Agoosto 2016 – Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa kulankeedii furitaanka xilli ciyaareedka 2016-17 ee Premier League guul ka gaartay Naadiga Sunderland.
Ciyaarta oo soconaysa 4-daqiiqo Sergio Aguero ayaa hoggaanka u dhiibay kooxdiisa kaddib markii uu gool u badalay gool ku laad lagu galay saaxiibkiis Raheem Sterling, wuxuuna ka dhigay ciyaarta 1-0, sidaas ayaana lagu kala nastay Man City oo ciyaarta ku hoggaaminaysa goolkaas.
Qeybtii labaad markii dib la isugu soo laabtay 71 daqiiqo Defoe ayaa u soo barbareeyay kooxdiisa Sunderland kaddib markii uu ka faa’idaystay qalad dhanka daafacyada Man City ah, markii baas dhex ka tuur ah oo uu ka helay saaxiibkiis Rodwell, wuxuuna ciyaarta kaga dhigay barbaro 1-1.
Dhammaadkii ciyaarta, daafaca dhowaantaan ku soo biiray Sunderland ee McNair ayaa iska dhaliyay gool quusiyay kooxdiisa kaddib karoos ka yimid Navas, wuxuuna ka dhigay natiijada ciyaarta 2-1 ay ku adkaatay Man City.
Haddaba halkaan hoose ka eeg rikoodhadii laga diiwaan geliyey kulankii Manchester City iyo Sunderland ee Premier League:-
>- Tababaraha cusub ee kooxda Manchester City Pep Guardiola ayaa guul ku furtay kulankiisii ugu horreeyey Premier League, halka Man City qudheedu ay guul ku bilaabtay xilli ciyaareedka cusub ee 2016-17.
>- Weeraryahanka kooxda Man City ee Sergio Aguero ayaa gool u bedelay 15 ka mid ah 18 gool ku laad (Rigoore) loo dhigay horyaalka Premier League.
>- Sunderland ayaan guulaysan kulankeeda ugu horreeya Premier League tan iyo guushoodii ay ka gaareen Bolton Wanderers sanadkii 2009-kii, tan iyo markaas waxaa loo diiwaan geliyey afar barbaro iyo labo guuldarro kulammadooda furitaanka horyaalka.
>- Jermain Defoe ayaa dhaliyey 144 gool oo Premier League ah, waxaana uu barbareeyey Robin van Persie oo booska 10-aad uga jira xiddigaha ugu goolasha badan taariikhda Premier League.
>- Fernandinho ayaa dhammaystiray baasaska ugu badan oo ah 83 baas, mana jiro ciyaaryahan ka badnaa kulamadii la ciyaaray shalay oo Sabti ah horyaalka Premier League.
>- Paddy McNair ayaa iska dhaliyey gool aan ula kac ahayn (own goal) kaliya 3 daqiiqo iyo 35 ilbiriqsi markii uu saftay kulankiisii ugu horreeyey Sunderland, waxaana McNair uu noqday ciyaaryahankii ugu horreeyey ee kooxdiisa gool ka dhaliya kulankiisa ugu horreeya Premier League tan iyo D.Gabbidon oo ka dhaliyay QPR kulankiisii ugu horreeyey shan sano ka hor 13/08/11.
Roberto Mancini oo sugaya shaqada kooxda Arsenal
Jose Mourinho oo diiday in Memphis Depay uu katago Man United